Akụkọ ihe mere eme nke Email na Email Design | Martech Zone
44 afọ gara aga, Raymond Tomlinson na-arụ ọrụ na ARPANET (ihe ndị gọọmentị US gafere na Internet dị n'ihu ọha), ma mepụta email. Ọ bụ nnukwu ọrụ n'ihi na ruo oge ahụ, enwere ike izipu ozi ma gụọ n'otu kọmputa ahụ. Nke a kwere ka onye ọrụ na ebe ebewapụrụ site na akara ngosi. Mgbe o gosipụtara onye otu Jerry Burchfiel, nzaghachi bụ:
Agwala onye ọ bụla! Nke a abụghị ihe anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na ya.
Email mbụ Ray Tomlinson zitere bụ ule ule e-mail Tomlinson kọwara dị ka ihe na-enweghị isi, ihe dịka "QWERTYUIOP". Na-aga n'ihu taa ma enwere akaụntụ email ijeri 4 na 23% nke ha raara nye azụmaahịa. A na-eme atụmatụ na a ga-enwe ihe dịka ijeri ozi ịntanetị 200 zitere n'afọ a naanị ya na uto nke 3-5% kwa afọ dịka Otu Radicati.
Akụkọ ihe mere eme nke Email Imewe Mgbanwe
Ndị mọnk Email emeela ka vidiyo a dị ukwuu jikọtara ihe atụmatụ na nhazi nhazi agbakwunyerela na email kemgbe ọtụtụ afọ.
Nanị ihe m chọrọ maka email bụ na ndị ahịa dị ka Microsoft Outlook ga-akwado nkwado ha maka HTML5, CSS na vidiyo ka anyị wee nwee ike iwepụ onwe anyị na mgbagwoju anya niile nke ịnweta ozi ịntanetị ka ọ dị mma, kpọọ nke ọma, ma dabara gafee nha ihuenyo niile. Nke ahụ ọ karịrị akarị ịjụ?
Tags: mgbochi phishingAOLbarack obamanwere ike-spamdkimDMARCemailemailemail akụkọ ihe mere emeemail MarketingftcGmailgmail taabụakụkọ ihe mere eme nke emailhotmailakpa ọchịelele microsoftMMSNorth Koreaele ihe anyaphishingoziSonyspamiwu spamspfna simpsonsỊ nwere ozi
Ma ọbụlagodi mgbe afọ ndị a niile gasịrị, a ka nwere ebe ịre ahịa maka email